Izidakamizwa "Heparin" - umuthi kuyinto anticoagulant yesenzo oqondile futhi kuvimbela igazi ekunqandeni.
"Heparin" imithi. Imiyalelo: yezemithi
Kunobufakazi obuthile bokuthi ukuthi izidakamizwa anezakhi immunosuppressive, okusho suppresses umzimba ozivikela. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuyisebenzisa for ekwelapheni izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba ezifana glomerulonephritis, anaemia hemolytic, futhi ukuze kuvinjelwe kwenqatshwa zinhlekelele ngesikhathi izinso ukufakelwa.
Izenzo izidakamizwa ngokushesha ngokwanele, Nokho, kancane. Ngo ekuphathweni eyodwa ibe okusithiyayo umthambo coagulation kwenzeka cishe ngokushesha futhi kuthathe amahora afika kwamane. Lapho iqondiswa umphumela intramuscularly kuza ngemva kwesikhashana, imizuzu engu-15 bese ihlala cishe amahora ayisithupha. Lapho iqondiswa isinyathelo phansi kwesikhumba iqala kumaminithi ezingamashumi kungathatha amahora angu-12. Umthelela unomphela iningi ukunciphisa igazi ekunqandeni kwenzeka uma iqondiswa ngemithambo yegazi. Naphezu kwakho konke lokhu, ukuze kuvikelwe imithi kaningi iqondiswa phansi kwesikhumba futhi intramuscularly.
"Heparin" imithi. Imiyalelo: izinkomba ukusetshenziswa
Ukulungiswa isetshenziselwa ukwelashwa kanye nokuvinjelwa kwezifo ezihambisana ne occlusion semithambo. Futhi ngokuvamile linqume umuthi wokuvimbela amahlule thrombosis, isilethikusebenza, embolism ekhipha igazi enhliziyweni nelifakayo, izitsha iso zobuchopho. Izidakamizwa iqondiswa ngesikhathi Ukuhlinzwa okukhulu kwenhliziyo ngaphandle nezitsha ngokusesilinganisweni ukuze igazi esimweni ketshezi amadivayisi hemodialysis, futhi dlula cardiopulmonary.
Izidakamizwa "Heparin". Imiyalelo: Indlela isicelo
Kufanele kuqashelwe ukuthi imithamo nezindlela zokuphatha kukhona ngokuqinile ngabanye futhi sizimisele kuphela udokotela. Uma kutholakale ukuthi une-acute isilethikusebenza, ngokungabi bikho Izimo Kunconywa ukuba libhekele izidakamizwa ngokondla usizo lokuqala eziphuthumayo bese ugcine ngaphansi ukwelashwa esibhedlela. Ngosuku olwandulela ukuqedwa umthamo nsuku zonke kufanele kancane kancane Nokho, isikhawu phakathi imijovo is ukhulise. Ngosuku lwesithathu ukwelashwa angajoyina anticoagulants engesobala. Isenzo umuthi waqashwa ekunqumeni isikhathi igazi coagulation. isikhathi ekunqandeni Kufanele sizimisele phakathi nezinsuku zokuqala eziyisikhombisa yokwelashwa engengaphansi kokukodwa zonke izinsuku ezimbili.
"Heparin" imithi. Imiyalelo: side effects kanye Izimo
Ukusebenzisa izidakamizwa "Heparin", kudingeka ucabangele lokho ingaqala ukopha. Ukuze uvimbele yezinkinga, umuthi esizosingathwa kuphela esimweni esibhedlela. Uma kukhona ukungabekezelelani ozimele noma njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, isingeniso kusho wayeka masinyane futhi zibeka izidakamizwa okuyinto zivimbela komzimba.
Imithi contraindicated nge oluhambisana diathesis, isifo sokuvuvukala kwemithambo acute, esibhibhayo emithambo yegazi, oyingozi futhi wegazi ezingelapheki, isibindi nesifo sezinso endocarditis, noma esivimba amanzi izinso wamaphaphu.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Heparin" ngesikhathi sokukhulelwa kungenzeka kuphela ngaphansi kwezimo zilandelwe ncamashi, ngoba ingozi nemiphumela emibi esukela cishe amaphesenti angu-21. Ukusebenzisa izidakamizwa kungaba ngaphansi eduze futhi njalo kweso lwezokwelapha. Ngesikhathi sokuncelisa ibele ngomlomo izidakamizwa ethatha uvunyelwe.
I nomuthi "Heparin" Tablets alusebenzi (hhayi kukhiqizwa ifomu Isikali enjalo), ngokuvamile izidakamizwa iqondiswa ngomjovo.
Lesi sihloko has a luyingxenye ngokuhlola indalo, ngakho ngaphambi ukwelashwa kubalulekile bonana nodokotela wakho futhi ufunde imiyalelo yomenzi ngokucophelela.
Umuthi 'Metozok ": yokusetshenziswa, analogs kanye nokubuyekeza
"Imipenem + Cilastatin": incazelo, izilinganiso umsebenzisi kanye nokubuyekeza
Izidakamizwa "bisacodyl": isitatimende
Isitayela abathandwayo ulimi Russian
Thuma Domain - kuyini?
Uhlelo Heliocentric emisebenzini uCopernicus, Kepler, Newton
Izicucu ezinomsoco namanzi ezivela esitshalo seqanda: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo ukupheka
Neuroma Morton sika
Imibuzo Inhlamba: kuyini izwi ezinenhlamba?
Osteochondrosis wesibeletho kanye ingcindezi enkulu kunokujwayelekile